I-China Foam yerabha Strip enamathelayo eTape mveliso kunye nabenzi | Tianzheng
Umtya weRubber Strip ngeTape yokuNamathela
Umzi mveliso wethu ubonelela ngemigca yokutywina ekumgangatho ophezulu, efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeminyango kunye neefestile, ezinje ngeengcango zomthi, iingcango zentsimbi, ucango lokhuseleko, amasango ahambayo, iingcango zokutyibilika, iingcango zemoto njl njl. esetyenziswa kwizixhobo zaseKhaya, ehotele, esibhedlele, kwisakhiwo seshishini, kwiiprojekthi ezicocekileyo, nakwiivenkile ezinkulu zemarike njl njl. irabha yethu yokusika iza ngobukhulu obuqhelekileyo ukusuka kububanzi obuyi-6mm ukuya kuma-500mm ububanzi kwaye iyafumaneka kwizinyuko ukusuka kwi-1.5mm ukuya kwi-15mm. Zonke iintlobo zemicu yerabha zinoburhabaxa obuhlukeneyo kunye nobukho bobubanzi, nceda unxibelelane nathi ukuba awububoni ubungakanani obuyifunayo.Imicu yerabha eyenziwe nge-PE nezinto ze-PU, ukumelana neinyembezi, ukungqubana okuphantsi kunye nokuhlala ixesha elide ukusebenzisa. Zininzi iintlobo zeentlobo zemichilo yerabha egwebu kunye ne-3M elungileyo yokuncamathela kumgangatho.
Umtya weRubber Strip ngenkcazo yeTape yokuNamathela
Esi siqwengana sezulu sihlala ixesha elide, kwaye sixinene nezinto ezixineneyo, ezinje ngeSilicone kunye nePV, ​​umtya we-Keliiyo Rubber Foam Seal unezinto eziguqukayo, ukomelela, kwaye uhlala ixesha elide. Ithintela ukuqokelelwa kothuli phakathi kweengcango ezityibilikayo, iibhlokhi zebugs zingangeni ngaphakathi, iibhlokhi zomoya okanye ukubanda, kunye negumbi elingena sandi. Zininzi ezinye izinto ezisetyenziswayo kule tywina lendawo yemozulu isusela kwiminyango yefriji ukuya ekutywinweni kweengcango zemoto; Ukongeza ekunciphiseni ingxolo yangaphandle, sebenzisa iteyiphu yerabha yokuTywina ukuthintela i-slammin enzima Faka isicelo kwiminyango eyahlukeneyo kunye neefestile, ezinje ngeengcango zomthi, iingcango zentsimbi, ucango lokhuseleko, amasango ahambayo, iingcango zokutyibilika, iingcango zemoto njl.
Faka isicelo kwiminyango eyahlukeneyo kunye neefestile, ezinje ngeminyango eyenziwe ngomthi, iingcango zentsimbi, ucango lokhuseleko, amasango ahambayo, iingcango ezityibilikayo, iingcango zemoto njl.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zasekhaya, ihotele, isibhedlele, isakhiwo seshishini, iiprojekthi ezicocekileyo, kunye neevenkile ezinkulu zemarike njl.
Luthambe 1.Good, bhetyebhetye kunye anti-deformation
2.Self-Bukanqinishe ukuxhasa kulula ukuyifaka, umhombiso, amatywina ngokuqinileyo
Akukho phunga le-amd alikho monakalo ebantwini, kwaye linobuhlobo bendawo yokuhlala
Ubuchule sezulu 4.Excellent, anti-ukwaluphala, ukuxhathisa anti-enxibe kunye nokumelana imichiza
5.Excellent yokusebenza anti-UV, bhetyebhetye super and luthambe
Ukusebenza ngokutywina okungagungqiyo, ukothuka, ukufudumeza ubushushu kunye nokugquma kwesandi
7. iyeka ubushushu, ingqele, uthuli, izinambuzane, ingxolo nemvula.
Egqithileyo Nokuncamathela ngerabha Tywina
Okulandelayo: Isixhobo seRubber esizimeleyo
Umtya weRubber wokuTywina umtya
Ukuqhekeza iMozulu yeRubber
Itape yeRubber Foam yemo yezulu
Abicah ngerabha amagwebu Sponge Seal Strip